Namhlanje sisikhumbuzo seKhibhodi ye-II eyandisiweyo ye-Apple, enye yezona bhodi zibalaseleyo zeMac | Ndisuka mac
Namhlanje sisikhumbuzo seKhibhodi ye-II eyandisiweyo ye-Apple, enye yezona zitshixo zibalaseleyo zeMac
Amaxesha ngamaxesha kufanelekile ukujonga emva, ukwazi iimveliso ze-Apple ezitshintshe imbali. Sibuyele emva ngo-1990, xa i-iPhone yayingakhange ibekho. I-Apple igcinwe Ngale mini, i-patent ye-Apple eyongezelelweyo ye-Keyboard II. Njengoko iApple iqhela, iya kuba lutshintsho. Ukuya kuthi ga kwinqanaba, kude kube ngumhla, ii-maqueros ezininzi ziyaqhubeka nokusebenzisa le keyboard. Kwaye ayisiyiyo inkanuko. Ngexesha lamaqhosha anokuhamba okuncitshisiweyo, njengomzekelo ikhibhodi yeelaptops zamva nje zeApple, Abasebenzisi abaninzi basathanda ikhibhodi yoomatshini.
Xa ikhibhodi yesibini eyandisiweyo yeApple yenziwa ngefomula efanelekileyo: ixesha lidlulile kwaye ikhibhodi yayifana nosuku lokuqala, la Ukuchwetheza ukuziva kwakugqibelele kunye isandi Ukuhamba nezitshixo, cofa-uvale, kuvakala ngathi ngumculo wasezulwini. Ngelo xesha, iikhompyuter zazilungisiwe, kwaye uninzi lwenza iinzame zokubala phakathi koqwalaselo lwazo, kunye nekhibhodi ye-Apple. Namhlanje, inokusetyenziswa enkosi kwiadaptha ukuguqula imveliso yekhibhodi ibe yi-USB.
Kwabaninzi, yenye yezona zitshixo zibalaseleyo kwimbali yeApple. Okwangoku unokucinga ukuba ikhibhodi yenziwe nguSteve Jobs ngokwakhe. Ewe, kule meko, kwakungekho njalo. Imisebenzi yayichasene neekhibhodi ezandisiweyo, ezaqala ukwenziwa ngo-1987. Kwakuloo nyaka, imisebenzi yashiya i-Apple emva komlo wangaphakathi ne-CEO uJohn Sculley. USteve Jobs ukhethe ikhibhodi kwisitayile esinyulu seApple, ngaphandle kweentolo okanye iisimboli. Asazi ukuba angangumxhasi weTouch Bar namhlanje.
Kodwa le keyboard ye-Apple yenzelwe impumelelo. Ngaba izinto zepremiyamu. Ukuchaneka ngexesha lokubhalwa akukushiyanga ungakhathali. Phantse inqaku ngalinye lavakala ngendlela eyahlukileyo, likwazi ukuzichonga. Kananjalo, kuninzi, indawo yokubuyela umva yayiyile nto kanye babeyifuna.
Kwi-nostalgic, izise iindaba ezisakhunjulwayo nanamhlanje. Oonobumba abakhulu babeshiywe phakathi xa ubacinezele, nto leyo eyenze ukuba kubonakale ngokukhawuleza ukuba ubhala ngoonobumba abakhulu. Izise unyawo olwandisiweyo kwisiseko sayo, ngokungafaniyo neyandulelayo, iyilungelelanisa kubude.
Ngamafutshane, I-keyboard ayizange isishiye singakhathali kwaye namhlanje siyayikhumbula njengoko kufanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Namhlanje sisikhumbuzo seKhibhodi ye-II eyandisiweyo ye-Apple, enye yezona zitshixo zibalaseleyo zeMac
dickson isibini sitsho
Umbuzo ngulo? inokumodareyithwa ukuyisebenzisa kunye ne-usb kwi-mac yanamhlanje?
Phendula isibini sikaDickson
Indawo yokuzivocavoca ehambelana neGymKit iseOstreliya
Rekhoda isikrini sakho seMac ngokuBamba kunye nokurekhoda, simahla ixesha elilinganiselweyo